Ho tonga any Eropa ny Honor 9X miaraka amin'ny fanovana isan-karazany | Androidsis
Volana vitsivitsy lasa izay fa ny Honor 9X, miaraka amin'ny 9X Pro, natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Sina. Modely roa vaovao ao anatin'ny elanelam-potoana misy ny marika, izay miloka amin'ilay fakantsary azo esorina amin'ny endriny. Telefaona roa nantsoina mba hanana varotra tsara eny an-tsena, satria manana ny marika fanantenana betsaka amin'izy ireo. Na dia hatramin'izao aza tsy mbola nisy fantatra momba ny fanombohany tany Eropa.
Toa manakaiky ny fanombohana ity Honor 9X any Eropa ity. Ny telefaona koa dia hanao izany amin'ny fanovana vitsivitsy, manamarika, mba hahatonga azy io ho tonga vaovao eo anelanelan'ny elanelana eny an-tsena. Anisan'ireo fanovana ny toerana misy ny sensor eo amin'ny finday amin'ny telefaona.
Navoaka ireo mpanafika izay an'ny Eoropeanina hafa amin'ity Honor 9X ity. Ao amin'izy ireo no ahitanao izany ny sensor ny dian-tànana dia ho hita ao aorina, tsy toy ny kinovan'ny sinoa nametrahana azy teo an-daniny. Ity no fanovana lehibe voalohany an-telefaona, na dia tsy izy irery aza.
toy ny Hita ihany koa fa hampiasa fakan-tsary any aoriana izy io, izay tsy tao amin'ny maodely mahazatra. Io no maodely Pro izay misy fakantsary telo aoriana. Ka ny marika dia handefa ity modely ity amin'ny anarana mahazatra eo amin'ny tsena eropeana.
Raha misy dia toa izany ity Honor 9X ity dia mety ho ofisialy amin'ny volana oktobra sahady. Na dia mbola tsy nanamafy ny antsipiriany momba ny fandefasana ity modely any Eropa ity aza ny orinasa. Ny iray amin'ireo fanontaniana lehibe dia ny hoe afaka miaraka amin'ny fampiharana Google izy io, na dia maodely efa teo aza, dia azo atao tsara ny mampiasa azy ireo.
Noho izany dia tsy maintsy miandry isika mandritra ny herinandro vao hahalala bebe kokoa. amin'ny fanombohana ity Honor 9X any Eropa ity. Fanombohana fahalianana, satria mampanantena fa ho telefaona tsara eo afovoany. Azontsika antoka fa amin'ity herinandro ity dia fantatsika ny zava-drehetra momba ny fahatongavany teny an-tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Honor 9X dia havoaka any Eropa miaraka amin'ny fanovana maro